Caawinaad ka timid saaxiib, iskaa wax u qabso muddo dheer ku jiray ayaa dib ugu soo noqda wadada - Cunnooyinka ku socda Wheels
Caawinaad ka timid saaxiib, iskaa wax u qabso muddo dheer ku jiray ayaa dib ugu soo laabanaya wadada
Tan iyo markii Jim Gubluff uu ka fadhiistay 1998-dii, waxa uu si mutadawacnimo ah isugu xilqaamay in uu Cunnooyinka Galeemooyinka ku keeno ugu yaraan laba jeer todobaadkii deriskiisa Hastings. Markii lagu sameeyay qalliinka wadnaha 2020 taasoo keentay u guuritaanka xarun nololeed, wuxuu ka walwalay inuu joojiyo waxa uu ku tilmaamay "shaqada ugu fiican adduunka."
"Waxaan u maleynayay in laga yaabo inay noqon doonto dhamaadka," Jim ayaa yidhi. "Markaan samayn waayo, waan tabayaa."
Isagoo keligiis nool, Jim wuxuu bartay inuu deriskiisa ku barto shaqadiisa. Kahor ku dhawaad 25 sano oo uu tabaruc ugu ahaa Cunnooyinka Taagaga, waxa uu ku qaatay xirfadiisa u samaynta wicitaanada adeeg ee shirkada gaaska maxaliga ah, shaqadaas oo u keentay Hastings horaantii xirfadiisa.
"Markii ugu horeysay ee aan bilaabay tabarucida waxay idhi 'Maxaad halkan ka qabanaysaa, Jim? Wax jaban ma jiro!'
Sida Jim uu ka soo kabanayay qaliinkiisa, wax yar ma uusan ogeyn in mid ka mid ah saaxiibadiisa iskaa wax u qabso ah uu qorsheynayay qorshe u oggolaanaya inuu sii wado waxa uu aadka u jecel yahay.
'Aad buu ugu faraxsanahay inuu ku soo laabto'
"Waxaan leeyahay saaxiib sannado iyo sannado ku jiray jidka Jim, oo had iyo jeer wax ka weydiiya Jim," ayuu yidhi Fay Wallin. "Waan ogaa in Jim uusan bixi karin, taasna aad ayay u dhibtay."
"Waxay la jirtaa dadka aan jeclahay," Jim ayaa yidhi. "Waan ku riyaaqay Way i soo saartaa.”
Isagoo la kulmay Jim 12 sano ka hor isagoo soo gudbinaya waddooyinka jimcaha koox ay u yimaadeen inay u yaqaanaan "Friday Friends," Fay waxay la shaqeysay Sue Hill iyo Joannie Becker oo isku duwo barnaamijka Hastings Family Service Meals on Wheels si loo arko waxa la qaban karo. Mar uu Jim ka soo kabsaday qalliinka gurigiisa cusub, kaas oo ku dhaca inuu ku xidho goobta Cunnada ee Wheels ee Isbitaalka Regina, Fay waxay sheegtay inay jeclaan lahayd inay Jim u soo saarto laba jeer bishii si ay u umusho.
"Aad buu ugu faraxsanaa inuu dib ugu soo laabto," ayuu yidhi Fay.
Jim si fiican ayuu uga soo kabsaday qaliinkiisa, laakiin socodkiisu maaha sidii uu ahaan jiray sidaa awgeed waxa uu ku faraxsan yahay in Fay uu sii wado in uu ku sii raaco wadadiisa tabaruca ah. "Socodka aad iiguma wacna hadda, mana garanayo inay taasi dib u soo noqon doonto. Fay wuxuu qabtaa socodka iyo dhalmada, aniguna darawalnimada ayaan sameeyaa.
'Waxay noqdeen sida qoyskaaga'
In kasta oo ay samaynayeen dhalmo aan xidhiidh la lahayn intii lagu jiray cudurka faafa, Fay wuxuu sheegay in dhammaan qaatayaasha ay hubaan inay wax ka weydiiyaan Jim oo ay ka bixiyaan daaqadda haddii ay awoodaan.
"Maryan aad bay u mahadsantahay oo waxay ku waydiin doontaa, 'Sidee yahay darawalkaagu maanta?'" ayay tidhi Fay mid ka mid ah dadka sida joogtada ah u qaata (oo magaceeda loo beddelay si loo ilaaliyo aqoonsigeeda). "Saaxiibtinimadaas waa ay jirtaa waxayna noqonayaan qoyskaaga."
Sue, oo gacan ka geysta isku-dubbaridka barnaamijka, ayaa sheegtay in dadka sida Fay iyo Jim ay yihiin kuwa ka dhigaya Cunnada Taayirada mid gaar ah iyo kheyraad aan looga maarmin bulshada.
"Daaneeyayaashayadu aad ayay uga mahadcelinayaan waxa ay qabtaan," ayay tiri. "Labadooduba waxay nagu soo wargeliyeen sannadihii la soo dhaafay haddii ay wax ku saxan yihiin qaataha si aan qof u hubinno."
Had iyo jeer waxaan u baahanahay tabaruceyaal si aan cunto u keeno! Waxaad isku qori kartaa halkan Waxa kale oo aad ku taageeri kartaa shaqadooda samaynta deeq.